Kaaliyaha Wakiilka QM ee dhanka Nabadgalyada oo gaartey Xarunta Maamulka Jubba ee Kismaayo + Sawiro – idalenews.com
Kaaliyaha Wakiilka QM ee dhanka Nabadgalyada oo gaartey Xarunta Maamulka Jubba ee Kismaayo + Sawiro
Wafdi ay horkacaysay kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Cheng-Hokins ayaa gaartay magaalada Kismaayo oo xarun u ah maamulka kmg ee Jubba. Wafdiga Ms Hopkins oo uu ku wehliyey kuxigeenka xafiiska UNSOM Fatiha Serour ayaa kulan la yeeshay madaxda maamulka KMG ee Jubba.
Wafdiga ayaa waxaa madaxtooyada Kismaayo kusoo dhaweeyay hogaamiyaha maamulka kmg ee Jubba Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa Fartaag. Wafdiga Qarmada midoobay ayaa kulankooda la soo qaadey masuuliyiin maamulka Juba arrimo u badan dhank amaanka deegaanada maamulka kmg ee Jubba uu ka taliyo.
Markii uu kulanku soo idlaaday ayaa waxaa si wadajir ah shir saxaafadeed u qabtay Kaaliyaha xighayaha guud ee qaramada Midoobay Cheng-Hopkins iyo hogaamiye kuxigeenka maamulka kmg ee Jubba Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag iyagoo ka warbixiyay waxyaabihii labada dhinac ay ka wada hadleen.
XOG: RW Cabdi weli Sheekh Axmed oo Beri ku wajahan Degmada Markacadey Si uu ula kulmo Rag ka Tirsan Maamulka 3da Gobolka Ee KGsoomaaliya.
Muungaab iyo Kay oo Muqdisho ku kulmay.